ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အစုလိုက် အပြုံလိုက် တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်လာနိုင်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး သတိပေးပြီ . . . – Pwintsan
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အစုလိုက် အပြုံလိုက် တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်လာနိုင်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး သတိပေးပြီ . . .
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အစုလိုက်အပြုံလိုက် တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်လာနိုင်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသတိပေးပြီ
COVID-19 ကပ်ရော ဂါနှင့်ဆက်စပ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေသည် မည် သည့်ဘက်သို့ ဦးတည်သွားမည် ကို တထစ်ချ ပြောဆိုရန် အချိန် အနည်းငယ် စောလွန်းနေပြီး
ရောဂါဖြစ်ပွားသူများ နေရာအနှံ့ အပြားမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်လာခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယမန် နေ့တွင် သတိပေးထုတ်ပြန်သည်။
‘မပေါ့ဆသင့်သော CO-VID-19 ကပ်ရောဂါ’ ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက် တာမြင့်ထွေး ၏ သတိပေးထုတ် ပြန်ချက်တွင် ကပ်ရောဂါသဘော သဘာဝဆိုသည်မှာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တန့် နေခြင်း (သို့မဟုတ်) တဖြည်း ဖြည်းကျဆင်းလာခြင်း (သို့မ ဟုတ်) ရုတ်တရက် ထပ်မံမြင့် တက်လာခြင်းမျိုး ရှိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ယခုလိုအချိန်၌ မည်သည့် ဘက်သို့ ဦးတည်သွားမည်ကို တ ထစ်ချ ခန့်မှန်းပြောဆိုရန် အချိန် အနည်းငယ်စောလွန်းနေပြီး ပြည် သူများသိရှိရမည့် အချက်တစ် ချက်မှာ ရောဂါဖြစ်ပွားသူများနေရာအနှံ့အပြားမှ အစုလိုက်အပြုံ လိုက် တစ်ပြိုင်နက်တည်းနီးပါး ပေါ်လာခြင်းမျိုးလည်း ရှိနိုင်သည် ဟု အသိပေးသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ကို မလိုက်နာသူများ ရှိနေနိုင်ခြင်း နှင့် ရောဂါပျိုးချိန်ကာလ (Incu-bation Period) အတွင်း၌ ရှိနေ ပြီး ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးသူ များ၊ ရောဂါမဖြစ်သေးသူများ ရှိ နေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ချိန် တည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်းနီးပါး ရော ဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများ အများအ ပြားဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရောဂါကူးစက်မှု များသည် နေရာအနှံ့အပြား၌ တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်ပေါက်လာပါက ရောဂါထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲပြီး မနိုင် မနင်းဖြစ်လာမည်ဟု ဆိုသည်။
ရောဂါတစ်ခုသည် ရောဂါ ပျိုးချိန် ရှည်ကြာလျှင် ရှည်သ လောက် ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိကာ နေ ရာဒေသတစ်ခုတွင် ကပ်ရောဂါ တစ်ခု၏ ရောဂါပျိုးချိန် အရှည် ကြာဆုံးကာလ၏ နှစ်ဆတာကာ လအတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိမှသာ လျှင် အဆိုပါ နေရာဒေသ၌ ရော ဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိတော့ ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ယခု COVID-19 ရောဂါ တွင် ရောဂါပျိုးချိန်၏ နှစ်ဆတာ ကာလဖြစ်သော ၂၈ ရက်အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ တစ်ဦးတစ် ယောက်မျှ မရှိမှသာ ရောဂါကူး စက်ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိတော့ဟုကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန် ကြီးဌာနက ယူဆသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ သည် ကမ္ဘာ၌ အသစ်ဖြစ်ပေါ် သော ရောဂါဖြစ်သည့်အပြင် ရောဂါ၏ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ပုံ သဏ္ဌာန်၊
ပျံ့နှံ့မှုအရှိန်အဟုန်၊ ရောဂါပြင်းထန်မှု အတိုင်းအတာ စသည့် ရောဂါ၏ သဘောသဘာ ဝများကို အပြည့်အဝ မသိရှိရ သေးသဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိ တော့ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပါက လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် ကပ်ရော ဂါတစ်ခုခု၏ အတိမ်အနက်ကို လုံးဝလျှော့တွက်၍ မရကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူများနှင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံထား ရသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး နှိုးဆော်ချက်များ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား အရှိန် အဟုန်မပျက် ဆက်လက်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် လုံးဝ မပေါ့ဆရန်လည်း ၎င်းက မေတ္တာ ရပ်ခံသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 အ တည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှု ထုတ်ပြန် ချက်များတွင် မေလ ၁၈ ရက်က စ၍ ယမန်နေ့ ညအထိ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးခဲ့သူ နှစ်သောင်းကျော် အနက် ၅၃ ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ၅၃ ဦးအနက် ၅၂ ဦးသည် ပြည်ပနိုင်ငံများမှပြန် လာသဖြင့် အသွားအလာကန့် သတ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး ကျန်တစ် ဦးမှာ ပြည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရ သူဖြစ်သည်။
ရောဂါဖွဈပှားသူ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ တဈပွိုငျနကျ ပျေါလာနိုငျဟု ကနျြးမာရေးဝနျကွီးသတိပေးပွီ
COVID-19 ကပျရော ဂါနှငျ့ဆကျစပျ၍ မွနျမာနိုငျငံ၏ လကျရှိအခွအေနသေညျ မညျ သညျ့ဘကျသို့ ဦးတညျသှားမညျ ကို တထဈခြ ပွောဆိုရနျ အခြိနျ အနညျးငယျ စောလှနျးနပွေီး
ရောဂါဖွဈပှားသူမြား နရောအနှံ့ အပွားမှ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ တဈပွိုငျတညျး ပျေါလာခွငျးမြိုး ဖွဈနိုငျသညျဟု ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ယမနျ နတှေ့ငျ သတိပေးထုတျပွနျသညျ။
‘မပေါ့ဆသငျ့သော CO-VID-19 ကပျရောဂါ’ ခေါငျးစဉျ ဖွငျ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျ တာမွငျ့ထှေး ၏ သတိပေးထုတျ ပွနျခကျြတှငျ ကပျရောဂါသဘော သဘာဝဆိုသညျမှာ ဖွဈပှားမှုနှုနျး တဖွညျးဖွညျး မွငျ့တကျလာခွငျး (သို့မဟုတျ) ဖွဈပှားမှုနှုနျး တနျ့ နခွေငျး (သို့မဟုတျ) တဖွညျး ဖွညျးကဆြငျးလာခွငျး (သို့မ ဟုတျ) ရုတျတရကျ ထပျမံမွငျ့ တကျလာခွငျးမြိုး ရှိနိုငျကွောငျး ဖျောပွသညျ။
ယခုလိုအခြိနျ၌ မညျသညျ့ ဘကျသို့ ဦးတညျသှားမညျကို တ ထဈခြ ခနျ့မှနျးပွောဆိုရနျ အခြိနျ အနညျးငယျစောလှနျးနပွေီး ပွညျ သူမြားသိရှိရမညျ့ အခကျြတဈ ခကျြမှာ ရောဂါဖွဈပှားသူမြားနရောအနှံ့အပွားမှ အစုလိုကျအပွုံ လိုကျ တဈပွိုငျနကျတညျးနီးပါး ပျေါလာခွငျးမြိုးလညျး ရှိနိုငျသညျ ဟု အသိပေးသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျထားသော ဆောငျရနျ၊ ရှောငျရနျ အခကျြမြား ကို မလိုကျနာသူမြား ရှိနနေိုငျခွငျး နှငျ့ ရောဂါပြိုးခြိနျကာလ (Incu-bation Period) အတှငျး၌ ရှိနေ ပွီး ရောဂါလက်ခဏာမပွသေးသူ မြား၊ ရောဂါမဖွဈသေးသူမြား ရှိ နနေိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ တဈခြိနျ တညျး၊
တဈပွိုငျတညျးနီးပါး ရော ဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှုမြား အမြားအ ပွားဖွဈလာနိုငျသညျဟုဆိုသညျ။ထိုကဲ့သို့ ရောဂါကူးစကျမှု မြားသညျ နရောအနှံ့အပွား၌ တဈပွိုငျနကျ ပျေါပေါကျလာပါက ရောဂါထိနျးခြုပျရနျခကျခဲပွီး မနိုငျ မနငျးဖွဈလာမညျဟု ဆိုသညျ။
ရောဂါတဈခုသညျ ရောဂါ ပြိုးခြိနျ ရှညျကွာလြှငျ ရှညျသ လောကျ ပိုမိုအန်တရာယျရှိကာ နေ ရာဒသေတဈခုတှငျ ကပျရောဂါ တဈခု၏ ရောဂါပြိုးခြိနျ အရှညျ ကွာဆုံးကာလ၏ နှဈဆတာကာ လအတှငျး ရောဂါဖွဈပှားသူ တဈဦးတဈယောကျမြှ မရှိမှသာ လြှငျ အဆိုပါ နရောဒသေ၌ ရော ဂါကူးစကျဖွဈပှားခွငျး မရှိတော့ ဟု ကောကျခကျြခနြိုငျကွောငျး ဖျောပွသညျ။
ယခု COVID-19 ရောဂါ တှငျ ရောဂါပြိုးခြိနျ၏ နှဈဆတာ ကာလဖွဈသော ၂၈ ရကျအတှငျး ရောဂါဖွဈပှားသူ တဈဦးတဈ ယောကျမြှ မရှိမှသာ ရောဂါကူး စကျဖွဈပှားခွငျး မရှိတော့ဟုကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျ ကွီးဌာနက ယူဆသညျ။
COVID-19 ကပျရောဂါ သညျ ကမ်ဘာ၌ အသဈဖွဈပျေါ သော ရောဂါဖွဈသညျ့အပွငျ ရောဂါ၏ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှု ပုံ သဏ်ဌာနျ၊
ပြံ့နှံ့မှုအရှိနျအဟုနျ၊ ရောဂါပွငျးထနျမှု အတိုငျးအတာ စသညျ့ ရောဂါ၏ သဘောသဘာ ဝမြားကို အပွညျ့အဝ မသိရှိရ သေးသဖွငျ့ ရောဂါဖွဈပှားမှုမရှိ တော့ဟု ကောကျခကျြခနြိုငျသော အခွအေနသေို့ ရောကျရှိပါက လညျး မိမိတို့အနဖွေငျ့ ကပျရော ဂါတဈခုခု၏ အတိမျအနကျကို လုံးဝလြှော့တှကျ၍ မရကွောငျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ မွငျ့ထှေးက ဆိုသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ပွညျသူမြားနှငျ့ အသှားအလာ ကနျ့သတျခံထား ရသူမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျထားသော ကနျြးမာရေး အသိပညာပေး နှိုးဆျောခကျြမြား နှငျ့ လမျးညှနျခကျြမြားအား အရှိနျ အဟုနျမပကျြ ဆကျလကျလိုကျနာ ဆောငျရှကျကွပါရနျနှငျ့ လုံးဝ မပေါ့ဆရနျလညျး ၎င်းငျးက မတ်ေတာ ရပျခံသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ COVID-19 အ တညျပွုလူနာတှရှေိ့မှု ထုတျပွနျ ခကျြမြားတှငျ မလေ ၁၈ ရကျက စ၍ ယမနျနေ့ ညအထိ ဓာတျခှဲ စဈဆေးခဲ့သူ နှဈသောငျးကြျော အနကျ ၅၃ ဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့ခဲ့သညျ။
အဆိုပါ ၅၃ ဦးအနကျ ၅၂ ဦးသညျ ပွညျပနိုငျငံမြားမှပွနျ လာသဖွငျ့ အသှားအလာကနျ့ သတျခံထားရသူဖွဈပွီး ကနျြတဈ ဦးမှာ ပွညျတှငျး၌ ကူးစကျခံရ သူဖွဈသညျ။